Siyini iSitatimende Sabasebenzi nokuthi kungani sibaluleke kangaka | Ezezimali Zomnotho
Encarni Arcoya | 05/07/2021 20:00 | Umsebenzi
Zonke izimo zokusebenza, noma ngabe yini engathuthukiswa ezivumelwaneni ezihlanganisiwe, kungenxa yeSitatimende Sabasebenzi, umthethonqubo osungula izisekelo zomsebenzi, ngokomholo, amahora omsebenzi, ikhefu lokungabikho emsebenzini, ukukhubazeka ... Kodwa , Siyini iSitatimende Sabasebenzi? Kungani kubaluleke kangaka?
Uma uke wezwa ngayo kepha awazi ukuthi kungani ibaluleke kangaka nokuthi ingakuthinta kanjani emsebenzini wakho, sekuyisikhathi sokuthi wazi elinye lamathuluzi anamandla kakhulu ezisebenzi.
1 Siyini iSitatimende Sabasebenzi
2 Yini elawula iSitatimende Sabasebenzi
3 Isisebenzi Statute vs Isivumelwano Sokuhlanganyela
4 Kwenzekani uma ngesivumelwano noma ngeSivumelwano Sokubambisana kudingeka okuthile kimi okungavunyelwe kusitatimende sabasebenzi
5 Yiziphi izingxenye ezibaluleke kakhulu
Isitatimende Somsebenzi, esaziwa futhi ngegama laso, i-ET, empeleni liyikhodi, a umthetho wezomthetho, osebenza kubo bonke abasebenzi abaqashiwe. Lokho kusho ukuthi, kunoma yimuphi umsebenzi onenkontileka yokuqashwa nenkampani noma nomunye umuntu. Kungumsebenzi wakhe ukulawula ubudlelwano bokuqashwa obunalezi zinxusa ezimbili, ngakolunye uhlangothi umqashwa, ngakolunye umqashi.
Selokhu yazalwa ngo-1980, bekulokhu futhi kungumthethonqubo obaluleke kakhulu wobudlelwano babasebenzi. Manje, kusungula ubuncane, okungukuthi, ngesivumelwano esihlangene, ngesivumelwano, njll. okushiwo yi-Workers 'Statute kungathuthukiswa.
Isibonelo, ake ucabange ukuthi umthetho wabasebenzi ukukunikeza izinsuku ezi-5 zokufa komuntu. Ngakolunye uhlangothi, enkampanini yakho, ngokwesivumelwano, izinsuku ezihambelana nawe zingu-7. Akukho okuphikisanayo, kepha okushiwo yi-ET ukuthi ubuncane bezinsuku bunhlanu, kepha ohlangothini lwenkampani kungenzeka ube ngaphezulu.
Njengomthetho ojwayelekile, isigaba sabaphathi sezimo zokusebenza sizohlala ngalokho: Okokuqala, yini esungulwe esivumelwaneni sokuqashwa; khona-ke okushiwo Esivumelwaneni Esenziwe Ngokuhlanganyela. Futhi, ekugcineni, okushiwo iSitatimende Sabasebenzi.
Lokhu akusho ukuthi ngesivumelwano sokuqashwa izimo ezimbi kakhulu zingamukelwa; Ubuncane be-ET kumele buqinisekiswe njalo ngoba uma kungenjalo, kungabikwa.
Eminyakeni edlule, iSitatimende Sabasebenzi senziwe izinguquko, zaba ngcono nezimbi, maqondana nabasebenzi abaqashiwe. Okunye okuteleka kakhulu, futhi okumele ukubheke, ukuthi, yize abantu abaziqashile noma abazisebenzelayo bengafakwanga, kunqunywa ukuthi abazimele abazimele ngokwezomnotho bazovikelwa ngaphansi kwalo mthetho uma nje izidingo ezithile ziyahlangatshezwa.
Yini elawula iSitatimende Sabasebenzi
Manje njengoba usuyazi ukuthi yini iStatement's Workers 'Statute, impela uzobe uzibuza ukuthi uqukethe ini. Futhi ngukuthi, ngokujwayelekile, kusungula izisekelo eziphathelene nomsebenzi (ngokwesibonelo, ukusho ukuthi uneminyaka emingaki ongasebenza kuyo), kanye nosuku lokusebenza, izikhathi zesivivinyo, inkokhelo, ukuxoshwa, izindlela zesivumelwano, Ikhefu lokungabikho , ukungakwazi ukusebenza, ukusebenza ebusuku, isikhathi esengeziwe ...
Ngamanye amagama, une- inkambiso esemthethweni lapho kunikezwa khona imihlahlandlela emincane yobudlelwano bokuqashwa kuzo zonke izici ezingakuthonya.
Ngalesi sizathu, iSitatimende Sabasebenzi sihlukaniswe ngeziqu ezintathu:
Ebudlelwaneni bomsebenzi ngamunye.
Amalungelo wokumelwa ngokuhlanganyela kanye nokuhlanganiswa kwabasebenzi enkampanini.
Ekuxoxisaneni ngokuhlanganyela nasezivumelwaneni ezihlanganyelwe.
Lezi zihloko ezintathu ezinkulu zihlukaniswe zaba izahluko, izigaba kanye nama-athikili, kuze kufike kuma-92 esewonke.
Isisebenzi Statute vs Isivumelwano Sokuhlanganyela
Njengoba sishilo phambilini, iSitatimende Sabasebenzi sakha izimo ezincane zobudlelwano bokuqashwa, kepha lezi zingathuthukiswa ngenkontileka yokuqashwa noma nangesivumelwano esihlangene. Ngabe lokhu kusho ukuthi uMhlangano ungcono?
Isivumelwano Sokubambisana ngumthethonqubo ovela ngenxa yokuxoxisana phakathi kwabamele abasebenzi nenkampani uqobo. Kwesinye isikhathi ayithinti inkampani kuphela, kepha umkhakha (ngokwesibonelo, imboni yensimbi, umkhakha wobisi ...). Banobude obuthile futhi busungula izimo zokusebenza, kanye namalungelo nezibopho zeqembu ngalinye. (abasebenzi nenkampani). Vele, kufanele ihambisane nemibandela ephansi ekhona eSitatimendeni Sabasebenzi.
Singasho ukuthi Isivumelwano Esenziwe Ngokuhlanganyela siyinkontileka ebanzi yokuqashwa, lapho izici ezinjengeholide, izimvume, amahora okusebenza, amaholo, njll.
Kwenzekani uma ngesivumelwano noma ngeSivumelwano Sokubambisana kudingeka okuthile kimi okungavunyelwe kusitatimende sabasebenzi
Akumangazi kangako ukuthola izimo lapho, ngesivumelwano sokuqashwa, Isivumelwano Sokuhlanganyela, noma nsukuzonke, izinkampani noma abaqashi befuna kubasebenzi babo imibandela ephikisana Nomthetho Wabasebenzi (ngokwesibonelo, ukufaka amahora amaningi, ukungabi namaholide noma okungakhokhelwa, njll.).
Uma lokhu kwenzeka, umthetho osetshenziswayo yiSitatimende Sabasebenzi. Ngamanye amagama, uma kukhona okuthile Esivumelwaneni Sokuxoxisana Esihlangene noma esivumelwaneni esiphikisana nalokho amamaki amancane e-ET, leso sigatshana sikhanselwa ngokuzenzekelayo, ngoba imibandela yemithethonqubo kufanele ihlonishwe.
Kodwa-ke, iqiniso lingahluka, ngoba abaningi bangazamukela lezi zimo ukuze baqhubeke nokusebenza.
Yiziphi izingxenye ezibaluleke kakhulu
Kuzo zonke izindatshana ezingama-92 ezakha i-ET kufanele wazi ukuthi kunezingxenye ezithile ezibaluleke kakhulu, kungaba ngoba kuboniswane nazo kakhulu noma ngoba zithinta izici ezibalulekile zobudlelwano bokuqashwa.
Ngalo mqondo, yilezi:
Usuku lokusebenza kanye namakhefu. Ngokwe-Workers 'Statute, kunosuku olusebenzayo oluphelele lwamahora angama-40 ngesonto, yize ngokwesivumelwano kungenzeka abe ngaphansi. Ngokuqondene namakhefu, kunesidingo sokuthi kube namahora angu-12 okuphumula. Futhi, uma usuku lungaphezu kwamahora ayisithupha, kuzoba nekhefu lemizuzu engu-15.
Amalungelo abasebenzi. Mayelana nokukhuthazwa kwangaphakathi, okungafanele kubandlululwe, ubuqotho bomzimba, isithunzi, ukuqeqeshwa emsebenzini ...
Imikhuba evinjelwe. Njengokusebenzela izingane ezingaphansi kweminyaka eyi-16 (ngaphandle) noma ukwenza isikhathi esengeziwe noma umsebenzi wasebusuku ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-18.
Njengoba ukwazi ukubona, umthetho oyisisekelo onguSitatimende Sabasebenzi uvumela ukulawula ubudlelwano bezabasebenzi obulinganayo babasebenzi nabaqashi. Wake waba nezinkinga zalolu hlobo? Sazise.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Umsebenzi » Siyini iSitatimende Sabasebenzi